China Collagen for Cosmetics ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-Collagen yezimonyo igcwalisa i-collagen esikhunjeni, futhi ukwakheka kwe-molecule encane kulula ukumunca isikhumba ukufeza umphumela wobuhle.
I-Hydrolyzed i-collagen yezimonyo i-hydrolyzed kusuka ku-collagen encibilikayo. Izithako eziningi zibalulekile esikhunjeni futhi zingangena kalula esikhunjeni ukondla isikhumba nokwandisa ukuqina kwesikhumba. Njengesengezo semvelo sokondla izithambiso, sisetshenziselwe insipho, insipho kanye neminye imikhiqizo.Izinkinga zesikhumba abantu ababuzwa ngabesifazane abazikhathalelayo amabala esikhumba, ithoni yesikhumba esimnyama, isikhumba esomile nesomile emzimbeni nemibimbi / ukugogeka, okukhombisa izinga lokuhlukanisa ukunakwa. Kungabonakala ukuthi ukwenza mhlophe, ukufaka amanzi nokulwa nokuguga kuyizinkinga zesikhumba iningi labesifazane okudingeka lizixazulule.
Ocwaningweni, izakhamzimba ezidingeka kakhulu esikhunjeni kwakuyi-collagen, amavithamini, izitshalo ezikhishwe, i-lipids namaminerali, kulandelana.
Ikakhulukazi lapho kubuzwa ngezinto ezihlobene nokunwebeka kwesikhumba kanye nomswakama, iningi lababuzwe imibuzo likholelwa ukuthi i-collagen ihlobene kakhulu nokunwebeka kwesikhumba, ilandelwe umswakama, i-hyaluronic acid, i-elastin, i-lipids namavithamini namaminerali.
Kungabonakala ukuthi phakathi kwezinto eziningi ezihlobene nezinkinga zesikhumba, abathengi besifazane basaziwa kakhulu nge-collagen, futhi ukuqonda kwabo i-hyaluronic acid nakho kuyajula.Ukutholakala kwe-collagen peptide kuhle kakhulu.
I-Collagen yezimonyo ingamunca cishe i-100% ngomzimba womuntu, kuthi i-10% yayo imonywe ngokuphelele ngokwanele ukukhuthaza ngqo imetabolism yeseli.
Ukutholakala okuphezulu futhi okuphansi kwama-collagen peptides kungenxa yokwakheka kwawo okuhlukile kwe-amino acid: i-glycine ne-proline, ebala ama-50% wokuqukethwe okuphelele kwe-amino acid. IGelken inganikeza i-collagen enhle kakhulu yezimonyo.
Olandelayo: I-Collagen yebha yokudla okunempilo